Drawing Management , Output & Customize [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲများအကြောင်း ဆွေးနွေးချက်များ > Sticky---------ဖတ်ပေးပါ.. > AutoCAD > Drawing Management , Output & Customize
View Full Version : Drawing Management , Output & Customize
AutoCAD ကို VBA (Visual Basic for Application) နဲ့ တွဲပြီး သုံးရင် တစ်ခြား Microsoft ရဲ့ Applicationတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး သုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ Format လုပ်ထားတဲ့ Excel Sheetကနေ ပြီး ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ပုံတစ်ပုံဆွဲပြီးသားထွက်အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ OLE(Object Linking and Embedding) ကို Support လုပ်တဲ့ Application တွေနဲ့ တွဲပြီး သုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုယ်ပိုင် User Interface တစ်ခုဆွဲပြီး ပုံတစ်ပုံကို လိုသလို အလိုအလျောက်ဆွဲလို့ရပါတယ်။
ကျွန်တော် လုပ်ငန်းခွင်မှာ AutoCAD VBA ကို မသုံးဖူးပေမယ့် ကျောင်းတုန်းကတော့ ပရော့ဂျက်တစ်ခု လုပ်ဖူးပါတယ်။ အဲဒီတော့ တတ်သလောက်မှတ်သလောက် ဝေမျှပါရစေ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Visual Basic Editor ကို ဖွင့်ဖို့လိုပါတယ်။ အောက်က နည်းလမ်း ၃ခုထဲကနေ တစ်နည်းနည်းနဲ့ Visual Basic Editor ကို ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
Command: VBAIDE &lt;enter&gt;
Menu: Tools-&gt;Macro-&gt;Visual Basic Editor
နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ Visual Basic Editor အထဲမှာ ရှိတဲ့ Project Window ထဲက ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ Right Click နှိပ်ပြီး Insert-&gt;User Form ကို ရွေးပါ။ အောက်ကပုံမှာ ပြထားပါတယ်။
အဆင့် (၂) ။ ။ Tool Box ထဲမှာ ရှိတဲ့ Command Button Icon ပေါ်မှာ Click နှိပ်ပါ။
အဆင့် (၃) ။ ။ UserForm1 ပေါ်မှာ Comman Button တစ်ခုကို အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်းဆွဲပါ။
အဆင့်(၄)။ ။ Button ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ Text ကို ပြောင်းဖို့အတွက် Screen ရဲ့ ဘယ်ဘက်အောက်ထောင့်မှာ ရှိတဲ့ Properties Window မှာ Caption ကို ရွေးလိုက်ပါ။ နောက်ပြီး ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ စာသားကို ရိုက်ထည့်ပါ။ တစ်ခုသတိပြုရမှာက အခုလက်ရှိ Selection ဟာ CommandButton1 ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် CommandButton1 ကို တစ်ချက် ကလစ်နှိပ်ပြီး Select လုပ်ပါ။ Selection မှန်မမှန်ဆိုတာကို တော့ Properties Window ထဲက Name မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အဆင့်(၅)။ ၊ UserForm1 ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အခုလောလောလတ်လတ် စာသားပြောင်းထားတဲ့ Button ပေါ်မှာ Double Click နှိပ်ပါ။ Code Window ထွက်ပေါ်လာတာကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အဆင့်(၆)။ ။ ကျွန်တော်တို့ ကုဒ်စရေးပါတော့မယ်။ အောက်က ကုဒ်အတိုင်း ရိုက်ပါ ဒါမှ မဟုတ် ကော်ပီကူးထည့်ပါ။
StartPt(0) = 0# &#039;Start Point X Coordinate
StartPt(1) = 0# &#039;Start Point Y Coordinate
StartPt(2) = 0# &#039;Start Point Z Coordinate
EndPt(0) = 50# &#039;End Point X Coordinate
EndPt(1) = 50# &#039;End Point Y Coordinate
EndPt(2) = 0# &#039;End Point Z Coordinate
Set objLine = ThisDrawing.Application.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(StartPt, EndPt)
အစိမ်းရောင်နဲ့ ပေါ်နေတာတွေက Comments တွေပါ မရေးလည်း ရပါတယ်။
အဆင့် (၇) ။ ။ Run ကို နှိပ်ပါ။ အမှားမရှိဘူးဆိုရင် Run လို့ ရပါပြီ။
အဆင့်(၈)။ ။ AutoCAD ပေါ်မှာ အခုလို Dialog ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတာကို တွေ့ရပါမယ်။ Draw Line ပေါ်မှာ Click နှိပ်လိုက်ပါ။ AutoCAD ထဲမှာ မျဉ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းဆွဲပေးတာကို တွေ့ရပါမယ်။
ကုဒ်ကို နောက်နေ့ကြမှ ရှင်းပြပါ့မယ်။ Haveafun with AutoCAD VBA. ;D
နားမလည်တာ၊ မရှင်းတာ ၊ လုပ်လို့မရတာရှိရင် ပြောကြပါ။ ကျွန်တော် ကူညီပါ့မယ်။
ကို mario ရေ..
အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆွေးနွေးချက်ပဲဗျာ..
စာမေးပွဲတွေလည်း ပြီးပြီ ဆိုတော့..ဒီသင်ခန်းစာကနေစပြီး ကျွန်တော် လိုက်လုပ်ပါ့မယ်။
နောက်ထပ် သင်ခန်းစာတွေကိုလည်း ဆက်လက်မျှဝေပါဦး။စောင့်မျှော်နေပါတယ်ဗျာ.. :)
အသုံးဝင်မယ်. system variables လေးတွေ sharing လုပ်လိုက်ပါတယ်။
This is new variable of acad2009!
Menubar..(0,1).....menu bar ON/Off.
When you open acad 2009,you will lost menu bar coz &quot;menubar&quot; is set to &quot;0&quot;.
You can see menu bar by set to &quot;1&quot;.
Tilemode..(0,1)....change to model space/paper space
Lunits ..... (0.1,2,3,4,5..)...eg. you can type in command line &quot;lunits&quot; enter &quot;4&quot; enter.Your drawing units change for architecture.
Solid model ဆွဲပြီး Hide လုပ်လို. အစင်းတွေမကြိုက်၇င် Dispsilh...(0,1) set to dispsilh ...(1)
---autocad ဖွင်.ပြီး file new အတွက် command line (cmd) မှာ Lunits...enter ...4..enter ပြီးရင် limmax enter ...100&#039;,100&#039; enter...
ဒါဆိုရင် (Format -units-architecture ဆိုတဲ.အလုပ်နဲ. format -drawing limits -0,0 enter -100&#039;,100&#039; enter )ဆိုတဲ.အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်စရာမလိုပဲပြီးသွားမှာနော်။ကဲ system variables တွေသုံးလို.အဆင်မပြေဘူးလား။
Autolisp ကိုစိတ်ဝင်စား၇င် လေ.လာဖို. Pdf file လေးတင်ပေးလိုက် ပါ တယ်။
Autocad advance user ဖြစ်ဖို. autolisp ကိုမကျွမ်းးကျင် တောင်မှ micro လောက်တော.ေ၇းဖို..လိုပါတယ်။
Autocad မှာ close poly line တွေ Extrude လုပ်တဲ.အခါ original shape တွေ မရှိတော.ပဲ 3d object ၇ပါတယ်။နဂို shape တွေ လဲကျန်ချင်၇င်
command line မှာ &quot;delobj&quot; enter &quot;1&quot; enter. Delobj (0,1). Delete object ပါ။
Autocad 2009 သုံးတဲ.အခါ ပါလာတဲ. &quot;Ribbon&quot; ကို ပိတ်ချင်၇င် &quot;ribbonclose&quot; လို. command မှာ ရိုက်ပါ။ပြန်လိုချင်၇င် &quot;ribbon&quot;လို. command မှာ ရိုက်ပါ။
Autocad မှာ File open or new ဖွင်.တဲ.အခါ Filedialog box ကျမလာပဲ command line မှာပဲ path တွေတောင်းနေ၇င် Filedia enter 1 လို.commandline မှာ type လုပ်ပါ။ Filedia..0 ဖြစ်နေလို.ပါ။
Now i share from other for undocument system variables for Acad2009.
Here&#039;salist of new system variables for 2009. These are the variables that are displayed by the SETVAR command. The variables in the first list can be found in Help. If you know what the undocumented variables do please post back here.
Hides xref scales in the annotation, plot and viewport scale list.
0 xref scales are not hidden
1 xref scales are hidden
Controls the layer dialog display type.
0 the layer dialog is displayed in the legacy dialog
1 the layer dialog is displayed asamodeless (correct term?) dialog
Autocad နဲ့ဆွဲကြတဲ့အခါ ပုံထုတ်တဲ့အပိုင်းတွေ ...Dimension တွေ unit တွေscale တွေကလဲတကယ့်အလုပ်ခွင်မှာ
တတ်နိုင်သရွေ့ ပြောပေးပါ့မယ်။...မေးတာမရှိခဲ့ရင်တော့...ft,inches နဲ့ဆွဲထားတဲ့Drawing ကို m,cm,mm နဲ့ dimension ပေါ်အောင်ဘယ်လို
တပ်မလဲ...(သို့) m,cm,mm နဲ့ဆွဲထားတဲ့Drawing ကို ft,inches ..နဲ့ dimension ပေါ်အောင်ဘယ်လို
တပ်မလဲ..ဆိုတာမျိုးပေါ့ ...အထူးသဖြင့် ft,inches နဲ့ဆွဲပြီး or Design လုပ်ပြီးသားပုံကို m,cm,mm နဲ့လုပ်ဖို့ပေးရတဲ့အခါမျိုး...
မှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ့်ပြသနာအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။...ဒီအကြောင်းကိုတင်ပေးဖို့ အရင် ..မသိတာ၊မရှင်းတာတွေ စောင့်မယ်နော်...
unit တွေကိုပြောင်းချင်ရင်Auto CAD ထဲမှာDimension Style ကိုဖွင့်ပါ။ ဆက်ြ့ပီးModify (or)Override ကိုသွားပါ Primary Units ထဲဝင်ပြီးမိမိပြောင်းလိုသောunit ကိုပြောင်းပြီးDimension တပ်လျှင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။လိုအပ်လျှင်akmyat06@gmail.com ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ Thanks.........
ကျွန်တော်တို. autocad ဖွင့်ပြီး file open လုပ်တဲ့အခါ မှာ ကိုယ့်ရဲ့ file တွေထားတဲ့ folder or location ကို direct ရောက်တဲ့
အခါရောက်လိုက် ...မရောက်ရင် လဲ browse လုပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်နဲ့ stable မရှိပါဘူး။....ဘယ်အချိန် open လုပ်လုပ် ကိုယ့်ရဲ့
သတ်မှတ်ထားတဲ့ folder လေးရဲ့ path အတိုင်းပဲပွင့်ရင် မကောင်းဘူးလားဗျာ။....ပထမဆုံး ...desktop ပေါ်က autocad shortcut icon
ပေါ် right click , properties နဲ့ ဝင်ပြီး ပုံပါအတိုင်း start in မှာတွေ့ရပါမယ်။...ပြီးတော့ autocad ဖွင့်ပြီး command line မှာ
&quot;rememberfolders&quot; enter &quot;0&quot; enter လုပ်ပါ။...နောက် ဒုတိယပုံအတိုင်း desktop ပေါ်က autocad shortcut iconပေါ်
right click , properties နဲ့ ဝင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ folder path ကိုပေးပြီး apply လုပ်ပါ။နောက် autocad ကိုပိတ်ပါ။ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ပါ။
ဒါဆို ဘယ်အချိန် autocad က file open လုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ folder path ကို ရောက်သွားမှာပါ။ :) :)
ကဲကျွန်တော်တို့ architectural units ကို base ယူထားတဲ့ acad.dwt file ကိုဖွင့်ပြီး format_units_Architectural ကိုပြောင်းပါ။
ပြီးတော့ drawing limits တစ်ခုပေးလိုက်ပါ။eg..100&#039;,100&#039; ပေါ့။..လုပ်ချင်တာက feet,inches နဲ့ ဆွဲထားတဲ့ file ကို m or cm or mm
နဲ့ working drawing ထုတ်ပေးရမယ်ဆိုပါစို့။...Dimension style ကို m ,cm ,mm နဲ့3ခုလုပ်ပြီး ပေးချင်တာနဲ့ ထုတ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
ကျွန်တော်တစ်ခု နမူနာလုပ်ပြပါ့မယ် ...ကျန်တဲ့ ၂ခုတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်နိုင်သွားမှာပါ။..ပထမဆုံး Dimension style dialogbox
ကနေ m(meter) ဆိုပြီး dimension style တစ်ခု new လုပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် Primary units tab က units format မှာ architectural ကို
ပြောင်းပါ..ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံ 1 က Alternate units tab က display alternate unit ကို check လုပ်ပြီး တိုင်းရင်
3.281&#039; အလျားရှိတဲ့ မျဉ်းတစခုကို &quot;3&#039;3/8&quot;[1000.05]လို့ပြပါမယ်။ဒါက mm ကိုပြတာပါ။ဖြစ်သင့်တာက 1000 mm or 1000.05 mm လို့ပြသင့်ပါတယ်။အဲ...dimension style ရဲ့ line တွေရဲ့color တွေ arrow head တွေကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာအဆင်ပြေသလိုပြောင်းပေါ့နော်။
...ကဲ m(meter) dimension style ကို Alternate units tabက display alternate unit ကို uncheck လုပ်ပြီး ပုံ2က အတိုင်း
primary units tab က Unit format=decimal , precision=0.00, suffix=m ,scale factor=0.0254 ပြောင်းပြီး တိုင်းကြည့်ပါ
1.00m လို့ပြပါမယ်။..နောက် mm,cm dimension style တွေကိုလည်း suffix နဲ့ scale factor ကိုကစားပြီးလုပ်ကြည့်နိုင်ပါပြီ။
ကျွန်တော် အခုပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း sample file လေးပါ zip လုပ်တင်လိုက်ပါတယ်။အဆင်မပြေရင် ပြောပါဦး။
ကဲ upoload ကအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေလို့ ..http://www.mediafire.com/download.php?bmgttilwome
ဒီလိုပဲပေါင်းတင်လိုက်ပါတယ်။ P.s ..admin ရေ upload limit က 5000kb ဆိုပေမယ့် 100 kb လောက်ကို upload folder
full ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောနေတယ်။Check လုပ်ပေးကြပါဦး။ :) :)
Autolisp ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်ခင်များ.. Attach file မတွဲလို့ ကူပါဦး....